SHEEKH Zakir Naik oo laga mamnuucay in uu wacdi ka jeediyo Malaysia - Jigjiga Online
HomeDiintaSHEEKH Zakir Naik oo laga mamnuucay in uu wacdi ka jeediyo Malaysia
Malaysia (JigjigaOnline) – Daaci Zakir Naik ayaa laga mamnuucay in uu wacdi ka jeediyo Malaysia ka dib markii uu hadal muran dhaliyay ka yiri bulshada Malaysian-ka ah ee asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha iyo kuwa aaminsan diinta Hindu-ga.
Mamnuucitaanka ayaa lagu dhawaaqay 20 Agoosto, maalin uun ka dib markii Naik 10 saacadood su’aalo lagu waydiiyay xarunta ugu wayn booliiska.
Waa markii labaad ee su’aalo laga waydiiyo daaci Zakir khudbaddii uu jeediyay 8 bisha Agoosto markaas oo uu su’aal galiyay daacadnimada dadka Malaysian-ka ah ee aaminsan diinta Hindu-ga iyo waliba dadka Malaysia u dhashay ee asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha, kuwaas oo uu ku tilmaamay in ay yihiin martida dalka.
“Amarkan ayaa la siiyay dhammaan masuuliyiinta booliiska, waxaana arrintaas loo sameeyay maslaxada ammaanka qaranka, si loo sugo si wanaagsan u wada noolaanshaha bulshada,” sida uu sheegay Asmawati Axmad oo madax ka ah warfaafinta booliiska, sidaas waxaa ku warrantay warbaahinta Star.
Daaci Naik ayaa ku dhashay Mumbai bishii Oktoobar 1965, wuxuu ahaa Dhakhtar ka dibna wuxuu u go’ay dacwada isaga oo aasaasay hay’adda Islamic Research Foundation sannadkii 1991.
Waxaa aad loogu yaqaannaa in uu talefeshinka ka sii daayo wacdiyo Diinta Islaamka ah. Hay’adda uu aasaasay ee magaceeda loo soo gaabiyo IRF ayaana maamusha telefeshinka Peace TV, kaas oo sii daaya wacdiyo ay soo jeediyaan culimada caanka ka ah dunida.
Naik ayaa yiri Dadka reer Malaysia ee aaminsan diinta Hindu-ga waxay ra’iisulwasaaraha dalkooda Mahathir Moxamad uga daacadnimo badan yihiin ra’iisulwasaaraha Hindiya Narendra Modi. Qiyaas ahaan dadka reer Malaysia ee aaminsan diinta Hindu-ga ayaa bulshada ka ah 6%.
Bulshada asal ahaan Shiinaha ka soo jeedda ee dalka Malayshia u dhalatay ayaa iyagana 20% ah wuxuuna ku tilmaamay in ay “marti” ku yihiin dalka.
“Sida aad la socotaan maalmihii u dambeeyay waxaa la igu eedeeay in aan cunsurinimo ka abuuray dalka, dadka i dhaliishanna waxay isticmaalayeen erayo si gaar ah loo soo xushay oo macnihii ay xambaarsanaayeen laga weeciyay, isla markaasna waxyaabo aan jirin lagu sii daray. Maanta ayaan booliiska u caddeeyay meesha aan arrintaas ka taaganahay,”
“Waxaa i murugo galiyay in arrintan oo dhan ay sababtay in dadka aan Muslimiinta ahayn ay u qaataan in aan cunsuri ahay … cunsurimimadu waa camal shaydaan, aad ayaana uga soo horjeedaa sida Quraankaba ku qoran, waxayna arrintaasi liddi ku tahay wax kaste oon u taaganahay ka daaci Muslim ah ahaan,” ayuu intaas ku sii daray.
“Marka hore ma ogi cidda siisay degenaanshaha. Balse haddaad haysato degenaansho rasmi ah kama qayb qaadan kartid siyaasadda.”
“Wuxuu ka hadlay in Shiinaysku ku laabtaan Shiinaha, Hindiduna ku laabtaan Hindiya. Waxaas oo kale waligay ma dhihin. Balse asagu wuu yiri. Arrintaasina waa siyaasad,” ayuu yiri Mahathir, sida ay ka soo xigatay barta Malaysiakini .
Taliyihii hore ee booliiska Malaysia Cabdul Raxim Nuur ayaa yiri, “Caddaymaha xoogga badan ee hadalka uu ka yiri Kelantan iyo waxa (lagu eedeeyay) in uu ka sameeyay Hindiya, waxaan ku talinayaa in dawladdu ay Zakir kala laabato degenaanshada ayna ku wareejiso Hindiya, sidaa waxaa qoray wargeyska The Star.
Degenaanshaha la siiyay Zakir ee magaceeda loo soo gaabiyo PR waa mid banii’aadminimo oo laga aqoonsan yahay adduunka iyo dalalka ilbaxa ahba. In magangalyo la isa siiyo waa arrin ay damaanad qaadayso Islaamnimada mar haddii qofku uu halis wajahayo, xataa dadka aan Muslimiinta ahayn ayaana arrintaas loo sameeyaa,” ayuu yiri Abdul Hadi Awang oo ah madaxweynaha xisbiga Pan-Malaysian Islamic Party
“Aqoonta durugsan ee uu u leeyahay isbarbardhigga diimaha iyo awoodda heerka sare ah ee uu u leeyahay in uu u ol’oleeyo waynida Islaamka ayaa horseeday in ay dacwado ku soo oogaan kuwa aan awoodin in ay si kale u hor istaagaan, ayuu yiri Mufti Wan Salim Mohd Noor,” sida ay ku warrantay warbaahinta Berita Harian.
FADEEXAD: Nin Lagu Eedeeyay In Uu Muuqaal Ka Duubtay CAWRADA 550 Haween Ah Oo Madrid Ku Sugan Iyo Qalabka Uu U Adeegsaday Hawshiisa